I-Samsung Galaxy Duos, i-Samsung entsha ye-SIM ye-SIM | I-Androidsis
Imakethi ye-smartphone ine-niche encinci yokuxhaphaza: iiterminal ngenkxaso ye-SIM ezimbini. Isamsung sele ifumene lo mthambo ngelo xesha, kwaye ngoku ubuyela kumthwalo nge I-Samsung Galaxy S Duos I-smartphone entsha enenkxaso yamakhadi amabini eSIM.
Kwaye ke isigebenga saseKorea ufuna ukugcina ukwaphula iirekhodi Uluhlu lwayo lweGalaxy. Kwakhona, nangona ayisosilo nokuba, Ukucaciswa kwe-Samsung Galaxy S Duos bafanelekile kakhulu kwifowuni yolu hlobo.
Kubaqalayo i-Samsung Galaxy S Duos, okanye i-S7562 ukuba uyawathanda amagama ekhowudi, inesikrini esine-intshi ezine ngesisombululo se-WVGA. Intliziyo yakho ibetha ngenxa 1Ghz iprosesa yamandla, Uncedwe yi-512 MB ye-RAM.
Kwakhona i I-Samsung Galaxy S Duos iya kuba nenkumbulo yangaphakathi ye-4 Gb enokwandiswa kusetyenziswa amakhadi e-MicroSD. Inqaku elibuthathaka yikhamera ye-5-megapixel ngasemva ngaphandle kwesibane. Ubuncinci iya kuba nekhamera yangaphambili enesisombululo seVGA.
Le smartphone intsha, ethi iya kusebenza nge-Android 4.0Iimarike ziya kufika ngoSeptemba kwaye ziya kubandakanya i-Dual SIM Soloko ikwiNkqubo ekuvumela ukuba ufumane iminxeba kuyo nayiphi na kumakhadi amabini e-SIM esinayo kwifowuni.
Ndihlala nditsho ukuba imakethi ye-Dual SIM ichithwe kakhulu. Ngethamsanqa U-Sony waqonda kwaye ke ngoko usungule udidi lwe-Xperia, nangona kujongwa kwinkcazo ye-Samsung Galaxy S Duos, ndikhetha eyokugqibela. Kuya kufuneka silibone ixabiso ...
Iinkcukacha ezithe xaxe - Isamsung yazisa ngeefowuni ezine zeDuos eIndiya: iGalaxy Ace Duos, iGlass Y Duos, iGlass Y Pro Duos kunye ne-Star 3 Duos, Izigidi ezili-9 ze-Samsung Galaxy S3 igcinwe, I-Sony Xperia tipo, i-smartphone entsha yakwa-Sony ene-SIM ezimbini
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » Samsung » Isamsung yazisa i-Samsung Galaxy S Duos, i-smartphone entsha ene-SIM inkxaso
Ngaba ikhamera inombane?